Eric Garcia Oo La Sheegay Inuu Garoomada Ka Maqnaan Doono Muddo Shan Isbuuc Ah
HomeWararka CiyaarahaEric Garcia oo la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono muddo shan isbuuc ah
January 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Barcelona ayaa daaha ka qaaday in daafaceeda Eric Garcia uu garoomada ka maqnaan doono ku dhawaad ​​shan isbuuc dhaawac soo gaaray.
Da’yarkii hore ee Manchester City ayaa lagu soo daray shaxdii ay barbaraha 1-1 la galeen Granada habeenkii sabtida ka hor inta aan lagu bedelin Clement Lenglet daqiiqadii 54aad.
Garcia ayaa u muuqday mid dareemaya dhaawac muruqa ah intii uu socday kulanka, Barcelona ayaana haatan xaqiijisay in 21 jirkaan uu garoomada ka maqnaan doono muddo bil ku dhow.
Warbixin lagu daabacay fcbarcelona.com ayaa lagu yiri: “Tijaabooyin saaka lagu sameeyay xiddiga kooxda kowaad ee Eric Garcia ayaa lagu xaqiijiyay dhaawac muruqa midig ah, waxa ay u badantahay in uu garoomada ka maqnaan doono ku dhawaad ​​5 todobaad, daafaca Barca ayaa garoonka ka baxay kadib 54-daqiiqo ee ciyaarta. Granada, oo lagu beddelay Clement Lenglet.”
Garcia ayaa weli ciyaaryahan muhiim ah u ah La Blaugrana tan iyo imaatinka Xavi , waxaana uu saftay 20 kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, oo ay ku jiraan 15 kulan oo uu ku soo bilowday La Liga.